လူတွေကသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုစေခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံကအခန်းကဏ္playကနေပါဝင်သလား။ (2019) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
စတိုင်များလူတို့သည်မိမိတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု pathologise ရှိမရှိတစ်ကဏ္ဍမှပါစဉ်းစားသလား? (2019)
အရှက်ကွဲခြင်းကို porn မှမိမိကိုယ်ကိုစွဲယုံဖို့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
စွဲနှင့်အတန်ငယ်-စွဲသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကပို Non-စွဲထက်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုထိခိုက်ကြောင်းသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုအလုပ်မဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတွက်တစ်ဦး propensity သရုပ်ပြနှင့်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်ထိခိုက်အဖြစ်မိမိတို့၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များကြုံတွေ့ခံစားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့စှဲလမျးသူအဖြစ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့တက်ရောက်လာသူများကို၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှုမွငျပုံနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့မတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့သည်လည်းအရှက်ကွဲခြင်းကိုစွဲအရှက်ကွဲခြင်း၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်သတင်းပို့အတူတစ်ဦးချင်း၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရိပ်မိပုံကိုသူနဲ့ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း hypothesised သို့သော်ဒီကိုမထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီယခင်သုတေသနမှာတွေ့ရှိရသေးပါ။ ၎င်းအတွက်ရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသည်သူတို့၏အပြုအမူကိုစွဲလမ်းမှု၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ပြင်ပထားခြင်းထက်သူတို့ကိုအသားကျစေမည့်အစားသူတို့သည်အရှက်ကွဲခြင်းကိုကြုံတွေ့ခံစားရခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသည် (Lickel, Steele, & Schmader, 2011) ဖြစ်နိုင်သည်။
Duffy, အသီနာ, ဒါဝိဒ်သည်အယ်လ် Dawson, Nima G. အ Moghaddam နှင့် Roshan Das Nair ။
လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး 34 မရှိ။ 1 (2019): 87-108 ။
စွဲနှင့်အတန်ငယ်-စွဲသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကပို Non-စွဲထက်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုထိခိုက်ကြောင်းသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုအလုပ်မဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတွက်တစ်ဦး propensity သရုပ်ပြနှင့်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်ထိခိုက်အဖြစ်မိမိတို့၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များကြုံတွေ့ခံစားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့စှဲလမျးသူအဖြစ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့တက်ရောက်လာသူများကို၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှုမွငျပုံနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့မတွေ့ရှိခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှက်ကွဲခြင်းကိုလူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမည်သို့ရှုမြင်ကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ စွဲလမ်းသူများသည်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းအကြောင်းများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုမထောက်ခံပါ။ ငါတို့သိသည်အတိုင်း, ဒီယခင်သုတေသနတွင်ရှာမတွေ့ပါ။ ၎င်းအတွက်ရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသည်သူတို့၏အပြုအမူကိုစွဲလမ်းမှု၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ပြင်ပထားခြင်းထက်သူတို့ကိုအသားကျစေမည့်အစားသူတို့သည်အရှက်ကွဲခြင်းကိုကြုံတွေ့ခံစားရခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသည် (Lickel, Steele, & Schmader, 2011) ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုကြည့်ရှုကြ၏။
နိဒါန်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုဟူသောအယူအဆကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံသော်လည်းဆက်လက်ငြင်းခုံဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုဆန့်ကျင်သူများနှင့်ထောက်ခံအားပေးသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအကျိုးရှိသည်ဟူသောအဆိုကိုထောက်ခံသည့်အထောက်အထားများကိုဆက်လက်ကိုးကားကြသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အယူအဆရေးရာနှင့်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိစာပေအခြေပြုအခြေအနေတွင်ကောက်ချက်ဆွဲသည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်စပ်နေသောရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုနားလည်ရန်လုံလောက်သောသုတေသနမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်စိတ်သောကရောက်စေနိုင်သည့်သို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံစသည့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောပြissuesနာများမှအာရုံလွဲသွားစေနိုင်သည့်တရား ၀ င်ခြင်း၊ နှင့်အရှက်ကွဲခြင်းခံစားချက်တွေကို။ သုတေသီများကလူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်ဆံမှုသည်ရှုပ်ထွေးကြောင်း (Hardy, 1998) နှင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းကိုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်တွေ့ကြုံရသည်။ ဥပမာ၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်၊ သူတို့မြင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူတို့နှင့်မည်သူကြည့်ရှုသည်၊ နာရီ (Attwood, 2005; Hald & Malamuth, 2008; Malamuth, Addison, & Koss, 2000; Poulsen, Busby, & Galovan, 2013; Reid, Li, Gilliland, Stein, & Fong, 2011) ။ လူများသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကိုအထူးသဖြင့်စဉ်းစားခြင်း၏တင်းကျပ်မှု (Reid et al ။ , 2009) သည်ရောဂါများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါနောက်ထပ် variable များကိုပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုယူဆရသောကြောင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရောဂါမပြုသောသူများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကူညီရန်ထပ်မံရှာဖွေရန်လိုသည်။ ။
ရည်ရွယ်ပါသည်: ဤလေ့လာမှု၏ခြုံငုံရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအားပေးပြီးမှအဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်စတိုင်များသက်ရောက်မှုစဉ်းစားခြင်းရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပဲ။ အဆိုပါမူလတန်းရည်မှန်းချက်ကိုအောက်ပါမှီခို variable တွေကိုအပေါ်မခဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ (Non-စှဲလမျးသူ) နဲ့ပြဿနာဖြစ်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရိပ်မိသောသူသင်တန်းသားများကို (porn စှဲလမျးသူ) ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပဲ: စဉ်းစားတွေးခေါ်စတိုင်များ, အရှက်ကွဲခြင်းကိုတုံ့ပြန်လိုလား၏အဆင့်ဆင့်, ယာနျဘာသာတရားကို၏အဆင့်ဆင့်နှင့် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရိပ်မိဆိုးကျိုးများ။ ဒီတစ်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးချဉ်းကပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ဦးနှစ်ဦး-tailed အယူအဆအလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအလယ်တန်းရည်မှန်းချက် In-depth ကိုသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူရှိခဲ့အရည်အသွေးအတွေ့အကြုံများကိုဖမ်းယူဖို့ဖြစ်တယ်။
ဒီဇိုင်း: ဒီလေ့လာမှုအရည်အသွေးဒေတာစုဆောင်းဖို့အရေအတွက်အချက်အလက်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစုဆောင်းရန်မေးခွန်းသုံးပြီးတစ်ဦးရောနှော-နည်းလမ်း sequential ရှင်းလင်းဒီဇိုင်း (MMSE) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
နည်းလမ်း - သင်တန်းသားများကို (= = ၂၆၅) ကိုယူကေအမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု (NHS) နှင့် NHS မဟုတ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှစုဆောင်းခဲ့သည်။ NHS မဟုတ်သူများပါ ၀ င်သူများအတွက်မေးခွန်းပုံစံများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင် တင်၍ လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့်ကြေငြာခဲ့သည်။ NHS စုဆောင်းမှုကိုအထူးကျန်းမာရေးဆေးခန်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းများ၌ပိုစတာများသုံးပြီးကြော်ငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုအများစုအများဆုံး - အပြောင်းအလဲနမူနာနမူနာ technique ကိုအသုံးချ။ ဤသည်မှာကွဲပြားခြားနားသောလူ ဦး ရေဆိုင်ရာနမူနာများကိုဖမ်းမိနိုင်စေရန်ဤသုတေသနအတွက်အသုံးပြုသောရည်ရွယ်ချက်နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေအတွက်အချက်အလက်များကိုလူ ဦး ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်းနှင့်အတည်ပြုထားသောနည်းလမ်း (၄) ခုဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ Cognitive Distortions (Yurica & DiTomasso, 265)၊ Self- Conscious Affect-2001 (Tangney, Dearing, Wagner, & Gramzow, 3)၊ အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်ခြင်း၏မျှတသောစာရင်း (Paulhus, 2000; 1991) နှင့်နှင့် အပြာစာပေသုံးစွဲမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုစကေး (Hald & Malamuth, 1998) ။ အင်တာဗျူးအားလုံးကို Skype ©အသံဖိုင်မှဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: သင်တန်းသားများအုပ်စုသုံးစု၏တဦးတည်းပိုင်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ; စွဲ, အတန်ငယ်စွဲ, ဒါမှမဟုတ် Non-စွဲ။ MANOVA အုပ်စုများသိသိသာသာသိမြင်မှုပျက်ယွင်းဘို့မိမိတို့ propensity အတွက်ကွဲပြားကြောင်းထင်ရှားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး, ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသုံးစွဲ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ၎င်းတို့၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်၏သက်ရောက်မှုနှင့်အချိန်သက်ရောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုအရှက်ကွဲချိန်ခွင်အဘို့, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးလိုလားဘို့မတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ Multinomial ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တန်းသားများကို '' ဘဝအပေါ်ညစ်ညမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု, အလုပ်မဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်စတိုင်များ (အလုံးစုံနှင့် Self-တန်ဖိုးရှိ, ချဲ့ခြင်းနှင့်ကံဇာတာပြောရာမှာ, အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်နှင့်မတရားအခြနှင့်ပြီးပြည့်စုံသူ၏ပြင်ပ) နှင့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များသိသိသာသာအုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပွငျဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်းစားစတိုင်များညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်း၏ခြုံငုံအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကြည့်ရှုသုံးစွဲအချိန်အကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့သောအယူအဆထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အရည်အသွေးရလဒ်များကိုသည်ဤတွေ့ရှိချက်ကိုထောက်ပံ့ခြင်း, စဉ်းစားတွေးခေါ်စတိုင်များသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့ဟောပြောချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဖော်ထုတ်မူလတန်း themes များညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ, လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများအရေးပါမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက်၏သက်ရောက်မှုများရိပ်မိ causation နှင့်အတူသင်တန်းသားများကို '' ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကြ၏။ ယင်းအရေအတွက်တွေ့ရှိချက်အတွက်ပျက်ကွက်ပေမယ့်ထို့အပွငျ, အရှက်ကွဲခြင်း၏အယူအဆ, အရှင်တစ်ဦးအတော်လေးတရားရှိဖို့သိမြင်မှုစတိုင်နှင့်အတူတွဲတန်ဖိုးများအတွက်ပဋိပက္ခ, pathologising ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါအယူအဆ supporting, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ pathologising အတွက်သြဇာအချက်အဖြစ်ကြီးပြင်းခြင်း, အရှက်ကွဲခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆွေးနွေးချက်: ဒီလေ့လာမှုစတိုင်များလူတို့သည်မိမိတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ဘယ်လိုကစားစဉ်းစားအခန်းကဏ္ဍကိုပြသသည်။ စဉ်းစားစတိုင်များနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းပြဿနာသို့မဟုတ်မဖြစ်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရိပ် မိ. ရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းလျက်, သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲများ၏ concept ကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါလူတွေသုံးတဲ့ဟောပြောချက်များထဲမှာထင်ရှားရှိပါတယ်။ အထူးတင်းကျပ်စဉ်းစားတွေးခေါ်စတိုင်များတစ် propensity နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအနုတ်လက္ခဏာကသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ ထို့ပြင်အုပ်စုသည်နှိုင်းယှဉ်အတွက်သိသာသည့်တူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်တန်ဖိုးများကိုသီအိုရီဘောင်အတွင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်; ကတင်းကျပ်စဉ်းစားတွေးခေါ်စတိုင်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပြုအမူတွေနဲ့အတူ incongruent ဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးများကိုထောက်ခံဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြောင်းပြန်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်စတိုင်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပြုအမူတွေနဲ့အတူ incongruent မဟုတ်သည့်တန်ဖိုးများကိုထောက်ခံပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကအမူအကျင့်ကိုယ်တိုင်ကမကျမည်အကြောင်းအဖြစ်, သုတေသနနှင့်ကုသမှုရှုထောင့်ကနေကအရေးကြီးတယ် (ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု) ပြဿနာနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်ပစ်မှတ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သိမြင်မှုမူဘောင်တစ်ဦးချင်းစီအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းအသုံးပြု။ ညစ်ညမ်းစွဲမကြာခဏစတိုင်များနှင့်တန်ဖိုးများကိုစဉ်းစား၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျစ်လျူရှုအဖြစ်လက်ရှိကုသမှုသူကို Self-အစီရင်ခံစာသူတို့အားပူဇော်ကြ၏။ အဲဒါကိုသိမြင် dissonance လျှော့ချရန်နှင့်အေဂျင်စီဖန်တီးပေးသွားဖို့ကူညီစေခြင်းငှါဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များအလငျး၌, စဉ်းစားစတိုင်များအနာဂတ်သုတေသနနှင့်ကုသရေးအတွက်အာရုံစူးစိုက်ဖြစ်သင့်သည်။